खेलकुद – हाम्राे पिपलबाेट
अविरल वर्षाका कारण योगिनी कप प्रभावित
नेपाल आइस योगिनी कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबार आएको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ ।
असोज ३ गते संचालन गर्ने तयारी भैरहेको प्रतियोगिता एक साता पछि हुने आयोजक सहयोग आवाज(हिभ) नेपालले जनाएको छ ।
बुधबार आएको अविरल वर्षाका कारण खजुरा गाउँपालिका केहि गाउँहरु डुबानमा परेको र प्रतियोगिता हुने खेल मैदान वर्षाका कारण बिग्रिएको कारण प्रतियोगिताको मिति सार्नु परेको प्रतियोगिता संयोजक तरिन्द्र बहादुर थापाले बताउनु भयो । नेपाल आइस योगिनी कप असोज ३ गते सविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ७ गते सम्म आयोजना गर्ने आयोजकले तयारी गरिरहेको थियो । वर्षाका कारण असोज ३ गते देखि खेल संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि प्रतियोगिता आयोजक सहयोगी आवाज(हिभ) नेपालका सदस्य गणेश राईले असोज ११ गते देखि असोज १७ गते सम्म प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।
नेपाल आइस वियरले मुख्य प्रायोजन गरेको योगिनी कप फुटबल खजुरा क्षेत्रको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो । खजुरा क्षेत्रमा फुुटबल खेलको लोकप्रियता बढाउन र फुटबलमा नँया प्रतिभा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित प्रतियोगिता गर्न लागेको संयोजक थापाले बताउनु भयो । थापाले भन्नु भयो, ‘विगतको इतिहास हेर्ने हो भने खजुरा क्षेत्र फुटबलमा सक्रिय थियो । यहाँ थुप्रै खेलाडीले राष्ट्रिय स्तरमा आफनो प्रतिभा मार्फत बाँकेलाई चिनाएका थिए । पछिल्ला समय नयाँ पुस्ताले भने त्यो सफलता पाउन सकेको छैनन । खेलमात्र होइन युवाहरु पछिल्लो समय लागुपदार्थ दुव्र्यसनमा फसेर आफनो अमुल्य समय बर्बात पारिरहेका छन । यस्ता समस्याबाट समाज पिडित भैरहेको बेला हामीले योगिनी कप फुटबल प्रतियोगिताको सुरुआत गर्दैछौं ।’
थापाले अगाडी थप्नु भयो, ‘बाँकेको गौघाटमा अहिले सम्म स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता भएको छैन । राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएर पनि फुटबलमा खजुरा पछि परेको छ । फुटबल स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन र खेलको विकासमा महत्वपुर्ण साबित भैसकेको छ । तर नियमित रुपमा प्रतियोगिता हुदैनन । त्यसको अभावलाई कम गर्न योगिनी कप फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको हौं ।’
बाँके जिल्ला फुटबल संघको प्राविधिक सहयोगमा गर्न लागिएको यस प्रतियोगितामा बाँके र बर्दियाका गरी ८ वटा फुटबल क्लबलाई सहभागी गराइनेछ ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने क्लबले ५० हजार, दोस्रो हुनेले २५ हजार र तेस्रो टिमलाई १५ हजार पुरस्कार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार, विधागत रुपमा उत्कृष्ट गोलकिपर, फरवार्ड, मिडफिल्डर, डिफेन्स र प्रशिक्षकलाई समेत पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
आयोजक हिभ नेपालका सदस्य गणेश राईले प्रतियोगितालाई भब्य रुपमा सफल बनाउनका लागि विभिन्न उपसमिति निर्माण गरेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
मंगलबार खजुरा २ गौघाट स्थित योगिनी उच्च माविमा भएको बैठकबाट सांस्कृति उपसमितिको संयोजकमा योगिनी मावि विद्यालय व्यवस्थापन समिति टोलीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको राईले बताउनु भयो ।
यसैगरी स्वागत उपसमितिमा राजकिशोर महतारा, मैदान व्यवस्थापन उपसमिति संयोजकमा नरेन्द्र भारती, स्टेज निर्माण उपसमितिमा लोकेन्द्र थापा, स्वयसेवक परिचालन उपसमितिमा कर्ण बहादुर महतारा र प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा याम बहादुर थापालाई संयोजकको रुपमा छनोट गरिएको छ ।
Author hamropipalbotPosted on १ आश्विन २०७६ Categories खेलकुद, मुख्य समाचारLeaveacomment on अविरल वर्षाका कारण योगिनी कप प्रभावित
फोर ए साइड आधारभुत तह फुटबल प्रतियोगिता वैजनाथ गाउँ पालिकामा सम्पन्न
फोर ए साइड आधारभुत तह फुटबल प्रतियोगिता वैजनाथ गाउ पालिका वडा नंं. ३ बैरहवा खेल मैदानमा सम्पन्न भएको छ ।
वैजनाथ प्यावसनको आयोजनामा भएको फुटवल प्रतियोगितामा गाउँ पालिका मा रहेका सम्पूर्ण प्यावसनमा आवद्ध विद्यालयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वैजनाथ गाँउ पालिकाका प्रमुख मान बहादुर रुचालले यसरी निजि विद्यालयहरुले खेलकुदमा गरेको लगानीको गाउँ पालिकाले मुक्त कण्ठले प्रशंम्सा गर्न चाहेको वताए । खेलकुदको विकासले नै असल विद्यार्थीहरुको विकास हुने गरेको वताए । खेलकुद क्षेत्र भनेको समाजमा र राष्ट्रमा नभै नहुने विधा भएको वताए ।
कार्यक्रमा बोल्दै प्यावसन बाके उपाध्यक्ष तथा क्रिसा कोहलपुरका अध्यक्ष दिनेश सिग्देलले निजि विद्यालयहरुले आफ्ना वालबालिकाको लागी विभिन्न किसिमका खेलकुद गर्ने गरेको वताए । स्थानिय सरकारले निजि विद्यालहरुलाई हेर्ने नजर फरक जहिले सम्म हुन्छ त्यति समय सम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन समस्या आउने वताए । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व प्यावसन बैजनाथका अध्यक्ष दमन पाण्डेले गरेका थिए । कार्यक्रमको व्यवस्थापन डायनामिक ई मि स्कुल बानियाभारले गरेको थियो । प्रतियोगितामा छात्र ,छात्रा दुवै प्रतियोगितामा दिप ज्योति मावि चिसापानि प्रथम भएको छ । छात्र ,छात्रा दुवै प्रतियोगितामा द्धुतिय डायनामिक ई.मि स्कुल बानियाभार भएको छ भने तितृय स्थान दिव्य विद्या निकेटन डिगिया भएको छ ।
Author hamropipalbotPosted on ३० श्रावण २०७६ Categories खेलकुद, मुख्य समाचारLeaveacomment on फोर ए साइड आधारभुत तह फुटबल प्रतियोगिता वैजनाथ गाउँ पालिकामा सम्पन्न
बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा बाँके जिल्ला क्याम्पस स्तरिय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा कलेज अफ म्यानेजमेन्ट नेपाल प्र्रथम, कोहलपुरमा रहेको बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस ‘बी’ द्वितीय र आयोजक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तृतीय भएको छ ।
अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको संयुक्त आयोजना भएको प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई ३० हजार, द्वितीय हुनेलाई बागेश्वरीलाई १५ हजार र तृतीय हुने आयोजक टिमलाई १० हजार नगद सहिट ट्रफि, मेडलले खेडालीहरुलाई सम्मान गरिएको छ । बुधबार कलेज अफ म्यानेजमेन्ट र बागेश्वरी बमुहुखी क्याम्पस कोहलपुरमा फाईनल खेल सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगितामा तीनवटा सेट कलेज अफ म्यानेजमेन्टले जितेर प्रथम हुन सफल भएको हो । बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको टिमको केहि व्यवस्थापनको कमजोरीले उपबिजेतामा चित बुझाउनु परेको बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस ‘बी’ टिमका व्यवस्थापक राम प्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । साथै लेखाडीहरुले केहि कमजोरीका कारण प्रतियोगितामा उपबिजेता बन्नु परेको टिमका क्याप्टेन शाक्ति शाहीले बताएका छन् । प्रतियोगिताबाट क्याम्पसलाई चिनाउन सफल भएकोमा खेलाडीहरुलाई क्याम्पस प्रमुख शिशिर कुमार शर्माले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका सचिव नारायण खनालले व्रिद्यार्थीहरुलाई किताबको ज्ञानसँगै अक्तिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागि गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
Author hamropipalbotPosted on १३ चैत्र २०७५ March 27, 2019 Categories खेलकुद, फिचर न्युज, मुख्य समाचारLeaveacomment on भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न
फुटबलले बिथोल्छ निन्द्रा, हृदयघातको खतरा !
विश्वकप फुटबल रुसमा हुँदैछ, त्यसको ज्वरोले भने नेपाली समाजलाई पनि च्यापिसकेको छ । फुटवलको यो महाकुम्भलाई छुटाउने कुरा भएन । मास्को लगायत रुसको ११ शहरमा हुने प्रतियोगिता हामी घरमै बसी-बसी हेर्न सक्छौं । यसका लागि कसैले टेलिभिजनको व्यवस्था गरेका होलान्, कसैले प्रोजेक्टरको ।
त्यसबाहेक टोल-टोलमा, रेष्टुरेन्टमा, खास जक्सनहरुमा फुटबल हेर्ने व्यवस्था गरिदैछ ।
करिब एक महिनासम्म हुने विश्वकप फुटबलले हाम्रो दैनिकी भने पुरै प्रभावित बनाउनेछ । किनभने विश्वकपको तालिका अनुसार कुनै खेल मध्यरातदेखि सुरु हुनेछ भने, कुनै साँझदेखि । कतिपय छुटाउनै नसक्ने मुलुकका खेलहरु मध्यरातमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।विश्वकप फुटवलले जुन किसिमको उल्लास ल्याएको छ, त्यो आफैमा सकारात्मक हो । तर, फुटवलको यो तालिकासँग तालमेल मिलाउँदा हाम्रो दैनिकी भने लथालिंग हुनसक्छ ।
किनभने, फुटवलकै लागि हामी रातभर जाग्रम बस्छौं । रातभर बस्ने भएपछि केही न केही खानैपर्‍यो । थरीथरीका स्न्याक्स, मदिराको पनि कतिले व्यवस्था गरेका होलान् । मदिरापान गरेपछि उत्तेजना बढ्छ । हो-हल्ला गरिन्छ ।
यसरी रातभर जाग्राम बसेर रमाइलो गरेपछि अर्को दिन हामी सामान्य लयमा र्फकन सक्दैनौ । उठाई अबेर हुन्छ, खाने तालिका नियमित हुँदैन । भनौं, दिनभरको कार्यतालिका अनुसार आफुलाई डोहोर्‍याउन सक्दैनौं । यसले हाम्रो दैनिक कामधन्दामा त वाधा पुर्‍याउँछ नै, त्यो भन्दा बढी स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ ।
स्वास्थ्यमा के कस्ता असर गर्छ ?
रातभर जाग्राम बसेर फुटबल हेरेपछि अर्को दिन हामी सामान्य लयमा र्फकन सक्दैनौ । उठाई अबेर हुन्छ, खाने तालिका नियमित हुँदैन । यसले हाम्रो दैनिक कामधन्दामा त वाधा पुर्‍याउँछ नै, त्यो भन्दा बढी स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ ।कतिपय खेल राति १२ बजेभन्दा अबेर सुरु हुनेछ । र, यी खेलहरु अक्सर छुटाउन नसकिने पनि छन् । यस्ता खेलहरु हेर्नका लागि हामी रातभर बस्छौं । रातभर बसेपछि हामी पर्याप्त निदाउन पाउँदैनौ । किनभने थाँती रहेका कामहरु भ्याउनुपर्ने हुन्छ ।
एकदिन मात्र भए, ठिकै हो । तर, महिनादिनसम्म हाम्रो दैनिकी यसैगरी प्रभावित हुन्छ । भनौं, हामीले पर्याप्त सुत्न पाउँदैनौ । स्वस्थ शरीरका लागि नियमित रुपमा ७ देखि ८ घण्टासम्म गहिरो निद्रा सुत्नुपर्ने हुन्छ । कम सुत्दा निरन्तर रुपमा स्नायु प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । यसले उच्च रक्तचाप र हृदयघातको खतरा निम्त्याउँछ ।
उच्च रक्तचापको भय
जब हामी राम्ररी सुत्दैनौ, त्यसले शरीरमा अनेक रोगको जोखिम बढाइदिन्छ । यसले उच्च रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ । किनभने पर्याप्त निद्रा नलिदा शरीरमा खराब कोलोस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ । यसले उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउँछ । हार्ट अट्याक, हार्ट फेलियर र अनियमित धड्कनको खतरा पनि हुन्छ ।
मोटोपन बढ्छ है
रातभर बसेपछि हाइ क्यालोरीको खानेकुरा खान मन लाग्छ । अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने, बिहान अबेर उठ्ने व्यक्तिहरु बिहानै करिब ६ सय ७० क्यालोरीभन्दा बढी खाइदिन्छन् । साथै निद्राको कमीले गर्दा शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने लेप्टिन नामको हर्मोनको स्तर कम हुन्छ र मोटोपन बढ्छ ।
अपर्याप्न निद्राले थकान लाग्ने, दिक्क लाग्ने, तनाव बढ्ने समस्या हुन्छ । यसले मुटुको रोग निम्त्याउँछ । डिप्रेसनग्रस्त बनाउँछ ।
जब हामी राती अबेरसम्म बस्छौं, भोक अनुभव हुन्छ । भोक मेट्न स्न्याक्स वा केही न केही खान्छौ । यसले मोटोपन बढाउँछ । मधुमेहको जोखिममा पार्छ । त्यसमाथि कार्बनडाई अक्साइडयुक्र खाना सेवन गरिन्छ, जसले ब्लड सुगरमा उथलपुथल ल्याउँछ ।
मानसिक समस्या झेल्नुपर्छ
मस्तिष्कलाई ताजा राख्न पर्याप्त निद्रा आवश्यक हुन्छ । गहिरो निद्रामा हुँदा हाम्रो शरीरले विषाक्त पदार्थहरुलाई सफा गर्ने काम गर्छ ।
राम्ररी सुत्न सकिएन भने यसले ‘मुड डिसअर्डर’को शिकार हुने खतरा हुन्छ । यसले हामीलाई भावनात्मक समस्या ल्याउँछ ।
कतिपय अनुसन्धानबाट के पुष्टि भएको छ भने, अनिन्द्राले स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ । किनभने गहिरो निन्द्रमा रहेको बेला दिमागले आफुलाई ‘रि-सेट’ गर्छ । निद्रा पुरा नहुँदा दिमागको यो प्रक्रियामा बाधा पुग्छ । भरपुर निद्रा नलिदा अल्जाइमर जस्तो रोगको शिकार बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
Author hamropipalbotPosted on ३१ जेष्ठ २०७५ Categories खेलकुद, विश्वकप २०१८Leaveacomment on फुटबलले बिथोल्छ निन्द्रा, हृदयघातको खतरा !
विश्वकप २०१८ – फिफा ले बलिया मानिएका टिम सार्वजनिक
२०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगित सुरु हुन अब ३ दिन मात्र बाँकी छ। सबै टिमले आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। अधिकांश टिम रसिया पुगिसकेका छन्। प्रतियोगिताअघि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले बलिया मानिएका टिम सार्वजनिक गरेको छ। टिममा रहेका खेलाडी र पछिल्लो समय निकालेको नतिजाका आधारमा फिफाले विश्वकप २०१८ का बलिया टिम सार्वजनिक गरेको हो।
प्रशिक्षक टिटेले ब्राजिलियन टिमलाई नयाँ स्वरुप दिएका छन्। छनोट खेलेर रसियाको टिकट काट्ने पहिलो टिम ब्राजिलले पछिल्लो चार वर्षमा धेरै सुधार गरिरहेको छ। २०१४ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७–१ ले पराजित भएको ब्राजिलले पछिल्लो खेलमा जर्मनीलाई हराएको थियो। म्युनिखमा भएको खेलमा ब्राजिलले जर्मनीमाथि १–० को जित निकालेको थियो। ग्राबियल जेसस, एलिन्सन र काउन्टिन्हो पछिल्लो समय उच्च फर्ममा छन्। ब्राजिलका अन्य खेलाडी पनि प्रतिभाशाली भएकाले टिमलाई सन्तुलित र बलियो मानिएको हो।
मुख्य खेलाडी– नेइमार
गत फेब्रुअरीमा घाइते भएका नेइमार अहिले फर्ममा आइसकेका छन्। उनले पछिल्ला दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा गोल गरेका छन्। २६ वर्षीय नेइमारले देशका लागि अहिलेसम्म ५५ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरिसकेका छन्। ब्राजिलका महान् खेलाडीहरु रोमारियो, रोनाल्डो र पेलेसँगै नेइमारलाई पनि दाँज्न थालिएको छ।
प्रशिक्षक टिटेको भनाइ- ‘ब्राजिल विश्वकपको दाबेदार हो। हामीले सम्पूर्ण तयारी सकेका छौं।’
(भिडियो हेर्न अर्को विन्डोमा खोल्नुहोला)
फ्रेन्च टिमलाई प्रतियोगिताको अर्को सशक्त टिम मानिएको छ। प्रशिक्षक डिडियर डेस्चाम्सले घोषणा गरेको २३ सदस्यीय टिममा स्टार खेलाडीको जमघट छ। पाउल पोग्बा, एन्टोनी ग्रिजम्यान, केलियन एमबाप्पे, उस्मान डेम्बेले जस्ता खेलाडी भएको फ्रेन्च टिमले विश्वकपमा तहल्का मच्चाउन सक्छ। प्रशिक्षक डिडियरले टिममा रहेका खेलाडीलाई सदुपयोग गर्न सके उपाधि जित्ने फिफाको विश्लेषण छ।
मुख्य खेलाडी – एन्टोनी ग्रिजम्यान
युरो २०१६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका ग्रिजम्यानले सिजनमा स्पेनिस क्लब एट्लेटिको म्याड्रिडबाट प्रभावशाली खेले पस्किए। म्याड्रिडले युरोपा लिगको उपाधि जित्दा ग्रिजम्यानको प्रदर्शन लोभलाग्दो थियो। बहुआयामिक प्रतिभा भएका ग्रिजम्यान फ्रान्सको अग्रपंक्तिको मुख्य हतियार हुन्।
प्रशिक्षक डिडियरको भनाइ- ‘हामीमाथि ठूलो अपेक्षा गरिएको छ। स्पेन, जर्मनी र ब्राजिल हामीभन्दा बलिया देखिएका छन्।’
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीका लागि रसियामा इतिहास बनाउने अवसर छ। जर्मनीले यस पटक उपाधि जिते सन् १९६२ पछि लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन हुने टिम बन्नेछ। गत वर्ष रसियामा भएको फिफा कन्फेडेरेसन कप जितेका अधिकांश खेलाडी जर्मनी टिममा छन्। एक वर्षमा यी खेलाडी अझ खारिएकाले जर्मन टिम गत वर्षभन्दा बलियो छ। टिमो वेर्नेर, लियोन गोरेटज्का र जाउसा किममिच जस्ता युवा खेलाडी टिममा हुनु जर्मनीको बलियो पक्ष हो। यी खेलाडीको आगमनले जर्मनीले उपाधि रक्षा गर्न सक्षम हुने विश्लेषण गरिएको छ।
मुख्य खेलाडी – मेसुट ओजिल
प्लेमेकर ओजिल जर्मनीका मुख्य खेलाडी हुन्। यद्यपि पछिल्लो समय देश र क्लबका लागि एकैनासको खेल देखाउन नसकेको भन्दै ओजिलको आलोचना भइरहेको छ। तर पनि उनी प्रतिभावान् मिडफिल्डर भएकोमा दुईमत छैन। ‘एसिस्ट किङ’को उपमा पाएका ओजिलले विश्वकपमा गोलका लागि कति पास मिलाउछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
प्रशिक्षक जोचिम लोको भनाइ- ‘जर्मनी इतिहासकै बलियो टिम भएकोमा दुईमत छैन। हामीले मैदानमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सक्यौं भने दोस्रो पटक च्याम्पियन हुनेछौं।
सन् २०१४ को विश्वकप र २०१६ को युरो कपमा स्पेनले सोचे अनुरुप प्रदर्शन गर्न सकेन। लगातार दुई प्रतियोगितामा असफल भएपछि स्पेनिस टिममा अहिले धेरै सुधार आइससकेको छ। २००८ को युरो कप, २०१० को विश्वकप र २०१२ फेरि युरो कप जितेको स्पेन फेरि पुरानै लयमा फर्कने प्रशिक्षक जुलेन लोप्टेगिको विश्वास छ। युरोपियन छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको स्पेनिस टिममा जितका लागि भोका एकसेएक प्रतिभाशाली खेलाडीको जमघट छ।
मुख्य खेलाडी – डेभिड सिल्भा
सिल्भाले स्पेनका लागि एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रय खेल खेलिसकेका छन्। स्पेनको सुनौलो पुस्ताका खेलाडी सिल्भाबाट २०१८ को विश्वकपमा धेरै आसा गरिएको छ। ३२ वर्षीय सिल्भा टिमका प्लेमेकर हुन्। युरोप छनोटमा पाँच गोल गरेका उनले सिजनमा म्यानचेस्टर सिटीलाई इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जिताउन उत्कृष्ट खेले। अर्कोतर्फ, उनी प्रशिक्षक जुलेनको रणनीति अनुसार खेल्नसक्ने खेलाडी हुन्। त्यसैले उनी प्रशिक्षकको प्रिय खेलाडी बन्ने पक्का छ।
प्रशिक्षक जुलेनको भनाइ- ‘टिम बलियो छ भने उपाधि जित्न गाह्रो हुन्न। २००८, २०१० र २०१२ मा ठूला उपाधि जित्दा हाम्रो टिम बलियो थियो, त्यसैले हामी सफल भयौं। यसपटक पनि हामी बलियो छौं र त्यो कुरा हामी उपाधि जितेर देखाउन चाहन्छौं।
Author HamropipalbotPosted on २९ जेष्ठ २०७५ June 16, 2018 Categories खेलकुद, फिचर न्युज, विश्वकप २०१८, विश्वकप टिम, विश्वकप समाचारLeaveacomment on विश्वकप २०१८ – फिफा ले बलिया मानिएका टिम सार्वजनिक
साईनिङ स्टार र जनज्योती विजयी
बाँकेको कोहलपुरमा जारि प्रथम मावि स्तरीय उपमेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार भएको पहिलो खेलमा साईनिङ स्टार मा.वि. बिजयी भएको छ । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान कोेहलपुरमा भएको खेलमा साईनिङ स्टार माबिले २ रनको रोचक जित निकालेको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको साईनिङ स्टारले निधारित १५ ओभरमा ९८ रन जोडेको थियो । जसकालागि सुरक्षाले ३१, मोनिका रानाले २३ र सिम्रन धामीले १४ रन जोडेका थिए ।
९९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको ग्रिनपिस मा.वि. का खेलाडीहरु ९६ रनमै समेटिएका थिए । ग्रिनपिसका लागि लब्ली विष्ट (१७) बाहेक अरु खेलाडीहरुले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । उक्त खेलको म्यान अफ द म्याच साईनिङ स्टारकी खेलाडी सुरक्षा परियार घाषित भईन ।
त्यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा जनज्योती मा.वि ६ बिकेटले बिजयी भएको छ । दिव्यविद्या सदन कोहलपुरलाई फराकिलो रन अन्तरले पराजित गर्दै जनज्योतीको टिमले जित निकालेको हो ।
पहिले ब्याटिङ गर्दै जनज्योती मा.वि. ले १ सय ९५ रनको स्कोर खडा गरेको थियो । टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको जनज्योतीका लागि जुना बुढा मगरले र समिक्षा वि.क.ले अबिजित रहँदै क्रमशः ५९ र ४५ रन जोडेकी थिए भने सुहाना चन्दले ३८ रन जोडेकी थिईन ।
१ सय ९६ रनको लक्ष्य पाएको दिब्यबिद्या सदन निधारित १५ ओभरमा ५५ रनमै समेटिएको थियो । खेलको वमन अफ द म्याच सर्वाधिक रन बनाउन सफल जनज्योती मा.वि. की खेलाडी जुना बुढा मगर घोषित भईन ।
आगामी असार ३ गतेसम्म संचालन हुने प्रतियोगिता अन्तर्गत आज बिहान सरस्वती मा.वि. र बागेश्वरी एकेडेमी बिच खेल हुने छ भने दोस्रो खेलमा लक्ष्मी मा.वि. र सगरमाथा ज्ञानपुञ्ज प्रतिस्प्रर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
Author hamropipalbotPosted on २८ जेष्ठ २०७५ Categories खेलकुद, फिचर न्युजLeaveacomment on साईनिङ स्टार र जनज्योती विजयी
Author Hamro PipalbotPosted on २८ जेष्ठ २०७५ Categories खेलकुदLeaveacomment on फत्तेपुरलाई हराउदै बाराले जित्यो खडक मेयर गोल्डकपको उपाध
विश्वकपमा हलचल मच्चाउन सक्ने ५ युवा खेलाडीहरु
विश्वकप नजिकिंदै जाँदा फ्यानहरु आफुले चिनेका र मनपर्ने फुटबलरहरुले कस्तो प्रदर्शन गर्लान् भनेर गफ तथा परिकल्पना गरिरहेका छन् । ३२ देशका सबै खेलाडीको नाम तथा खेलशैली थाहा नभएपनि वर्षभरी खेलिने क्लब फुटबलमा चम्केका खेलाडिहरुनै सबैले सम्झीरहेका हुन्छन् ।
तर विश्वकप एउटा यस्तो अवसर हो, जसमा नाम चलेका मात्रै होइन विश्वकप पछिको समयमा उत्तर आधुनिक शैलीमा खेली नाम कमाउने खेलाडिहरु पनि जन्मीछन् । विशेषतः युवा खेलाडिको लागि यो एउटा ठुलो अवसर हो । सन् २०१४ को विश्वकपमा कोलम्बीयाका जेम्स रोड्रीगेजको कौशलले विश्व फुटबलको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । कोलम्बीयालाई क्वाटर्पmाइनलसम्म पुराएका उनलाई विश्वकप पछि रियल मेड्रीड क्लबले अनुबन्धन गरेपछि उनको फुटबल करियर धेरै नै उकासिएको छ ।
यस्तै यो संस्करणको विश्वकपमा पनि विश्व फुटबललाई चकित पार्न सक्ने केहि युवा खेलाडिहरु यी हुन् ।
क्रिस्टीयन पावोन, अर्जेन्टीना
बोका जुनियर क्लबबाट खेल्ने २२ वर्षीय आक्रामक मिडफिल्डर पावोन अर्जेन्टीना टोलीको महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । तिब्र गतिमा बल ड्रिबल गर्ने क्षमताका उनि कुनै पनि दिशामा बललाई पल भरमै लगि विपक्षीबाट छलाइ टोलीका अन्य सदस्यलाई गोल गर्ने एरियामा दिन सक्छन् । उनको यो शैली हइटी विरुद्धको मैत्री पूर्ण खेलमा पनि देखिएको थियो । उनले उक्त खेलमा लियोनल मेसीलाई गोल गर्न सहयोग गर्ने क्रममा यहि कौशल देखाएका थिए ।
अर्जेन्टीनी टोलीमा आश्चर्यजनक रुपमा छानिएका जोर्ज साम्पाओलीको आगमन पछि उनको यो विश्वकपमा कस्तो भुमिका हुने पक्का नभएपनि उनले खेलको सुरुवातमै स्थान बनाउने सम्भावना छ । यदि सुरुवातमै नपरेतापनि पहिलो परिवर्तनको रुपमा मैदानमा आउन सक्छन् । लियोनल मेसीसँग उनको तालमेल उत्कृष्ट भएकोले पनि उनले खेलको माध्यमले दर्शकको मन जित्न सक्छन् ।
गोन्सालो गेचीस, पोर्चुगल
पोर्चुगलका उदयीमान स्टार गोन्सालोले क्लब फुटबल मार्फत् राम्रो अंकमा कमाइराखेका छन् । अघिल्लो सिजनमा भ्यालेन्सीयाको लागि खेलेका उनले ६ गोल गरेका थिए । अद्भुत गति साथ खेल्ने उनको दुर्लभ ड्रिबलिङ शैलीका कारण भ्यालेन्सीयाले उनलाई स्थायी रुपमै अनुबन्धन गर्ने इच्छा देखाइरहेको छ । २१ वर्षीय गोन्सालोलाई भ्यालेन्सीयाले अनुबन्धन गर्न ढिलाइ गरेमा विश्वकप पछि उनको प्रदर्शनका कारण उनलाई अनुबन्धन गर्न गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।
आल्वारो ओद्रीओजोला, स्पेन
रियल सोसीडाडको लागि ५० खेल खेलिसकेको २२ वर्षीय आल्वारो उमेरको तुलनामा धेरै नै परिपक्व रुपमा विशुद्ध डिफेन्डरको रुपमा खेल्न सक्ने क्षमताका खेलाडि हुन् । आश्चर्यजनक रुपमा स्पेनजस्तो बलियो टिममा स्थान बनाएका उनले स्पेनको डिफेन्सलाई मजबुत बनाएकै छन् र उनले सुरुवातको केहि खेल खेल्न पाएमा आगामी दिनमा उनको लागि बार्सिलोना र रियल मेड्रिड जस्तो क्लबको ढोका सहजै खुल्न सक्छ । उनको शसक्त खेलको बलमा स्पेनले यो विश्वकपमा पनि अपेक्षाकृत खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
हर्वीङ लोसानो, मेक्सीको
मेक्सीको लागि महत्वपूर्ण खेलाडि २२ वर्षीय लोसानोले नेदरल्याण्ड्सको क्लब पिएसभी इन्दोफेनको लागि खेल्दै डज लिगमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । अघिल्लो सिजनमा उक्त क्लबको लागि १९ गोल गरेका थिए । मिलफिल्डरको रुपमा खेल्ने खेलाडिको लागि यो अद्भुद सफलता हो । यो विश्वकपमा उनले देखाउने खेलले स्पेन, इंग्ल्याण्ड तथा जर्मनी क्लबको ध्यान आकर्षित गर्ने लगभग पक्का छ ।
पायोन सिस्तो, डेनमार्क
युगान्डामा जन्मेका २३ वर्षीय सिस्तो डेनमार्कमा आउँदा २ महिनाका थिए । सात वर्षको उमेरमा फुटबल कौशलका कारण उनले स्पेनिस क्लब सेल्ता भिगोको लागि खेल्ने मौका पाएपछि उनको फुटबल करियर ह्वात्तै माथी उठेको थियो । उनको तिब्र गतिमा खेल्ने शैली तथा डिफेन्डरहरुलाई हैरान पार्न सक्ने क्षमताका कारण डेनमार्कलाई यो विश्वकपमा अघि बढाउने प्रमुख खेलाडि उनै हुनेछन् । उनले डेनमार्कलाई कम्तीमा नकआउट चरणमा पु¥याउन सके स्पेनकै अरु ठुला क्लबमा जाने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
यो विश्वकप पनि अघिल्ला विश्वकपहरु जस्तै अनुभवी र युवा खेलाडिहरुको मिश्रणले रोचक हुने कुरामा दुइमत छैन । युवाको जोश र परिपक्व खेलाडिको अनुभवले रसियामा आयोजना हुने यस विश्वकपले फुटबल प्रेमीहरुलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक खेलको मज्जा दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
Author HamropipalbotPosted on २५ जेष्ठ २०७५ June 16, 2018 Categories खेलकुद, विश्वकप २०१८, विश्वकप खेलाडि, समाचारLeaveacomment on विश्वकपमा हलचल मच्चाउन सक्ने ५ युवा खेलाडीहरु
यी ५ खेलमा अप्रत्यासित नतिजा आएमा विश्वकप रोमाञ्चक हुनेछ
विश्वकप फुटबलमा विश्वका ३२ महारथी देशहरु प्रतियोगिताको ट्रफी उचाल्न भिड्ने गरेको भएतापनि केहि सिमित देशहरुकै पोल्टामा विश्वकपको उपाधि पुग्ने गरेको इतिहास छ ।
सन् २०१० मा स्पेनले पहिलो पटक विश्वकप जितेपनि स्पेन विश्वकपको दाबेदार सधैं थियो । पहिलो पटक सहभागि भएका वा २–३ पटक सहभागि भएका देशहरुले विश्वकप जित्ने कल्पना पनि गरेका हुँदैनन् । सकेसम्म क्वाटरफाइनल नत्र नकटआउट चरण सम्मा मात्र भएपनि पुग्नेनै नयाँ तथा तल्लो वरियतामा रहेका टोलीहरुको सोच हुने गरेको छ । तथापी यि नयाँ तथा तल्लो वरियताको टोलीले कतिपय खेलहरुमा हस्ती राष्ट्रहरुलाई हराइदिंदा विश्वकपको समिकरण नै परिवर्तन हुने गरेको छ । रसियामा आयोजना हुने यो संस्करणको विश्वकपमा यि ५ खेलमा अप्रत्याशित नतिजा आउन सक्ने तथा आएमा विश्वकप समिकरणलाई उथलपुथल पार्न सक्छन् ।
ब्राजील विरुद्ध स्वीट्जरल्याण्ड
५ पटक विश्वकप जितेको ब्राजीलले विश्वकप फुटबलको समुह चरणमा खासै अप्रत्यासित नतिजा बेहोर्नु परेको छैन । पछिल्लो २० वर्षमा ब्राजीलले विश्वकपको समुह चरणको कुनै खेलमा हार बेहोर्नु परेको छैन ।
यस्तोमा आगामी जुन १७ मा हुने ब्राजीर र स्वीट्जरल्याण्डको खेलमा ब्राजीलको यो किर्तिमानी यात्रा रोकिन सक्छ । सन् २०१० को विश्वकप विजेता स्पेनलाई समुह चरणमा हराएर विश्व फुटबललाई चकित पारेको स्वीट्जरल्याण्डले यो संस्करणमा ब्राजीललाई तिरिमिरी नपार्ला भन्न सकिंदैन ।
इंग्ल्याण्ड विरुद्ध ट्युनिसिया
विश्वकपको ड्र सार्वजनिक हुँदा इंग्ल्याण्डका जनताहरु दंग थिए । ग्रुप अफ डेथ मा परिएला कि भन्ने भयबाट मुक्त भइ यो संस्करणमा नकआउट स्टेजसम्म सहजै पुग्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
यद्यपी ट्युनिसिया पनि चिठ्ठा परेर विश्वकप खेल्न गएको टोली होइन । चतुर खेल र सन्तुलित गतिको कारण ट्युनिसियाले यो विश्वकपमा जुन १८ मा हुने खेलमा इंग्ल्याण्डलाई नमिठो हारको स्वाद चखाउने सम्भावना छ ।
ट्युनिसियाको सन्तुलित खेलले पक्कै इंग्ल्याण्डलाई दबाबमा राख्नेछ र दबाब झेल्ने क्षमता इंग्ल्याण्डमा छैन भन्ने कुरा २०१६ को युरो कपमा आइसल्याण्डसँग इंग्ल्याण्डले भोगको हारबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
पोल्याण्ड विरुद्ध सेनेगल
१९५० र १९९४ को विश्वकपमा तेश्रो स्थान हासिल गरेको पोल्याण्डले सन् २०१६ को युरो कपको क्वार्टरफाइनलमा पनि स्थान बनाएको थियो । फुटबलमा बलियो राष्ट्र भएतापनि यो संस्करणको विश्वकप क्लालिफायरमा अरु युरोपियन देशहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढि गोल खाने राष्ट्र पोल्याण्ड नै हो ।
यस्तोमा सन् २००२ मा विश्वकपको डिफेन्डर फ्रान्सलाई पहिलो खेलमा अप्रत्याशित रुपमा हराएको सेनेगलले पोल्याण्डलाई हराउने ठुलो सम्भावना छ ।
कालीडु कौलिबालीको डिफेन्स र लिभरपुलबाट खेल्ने सादियो माने को प्रेरणामा १९ जुनमा हुने खेलमा सेनेगलले पोल्याण्डलाई हराएमा विश्वकपको यो गु्रप रोमाञ्चक हुनेछ ।
जर्मनी विरुद्ध स्वीडेन
डिफेन्डीङ च्याम्पीयन जर्मनीले समुह चरणमा खासै कमजोर प्रदर्शन गर्ने गरेको छैन यद्यपी ठुलो अन्तरको जित हासिल गर्ने गरेको छ । तथापी सन् २०१० को विश्वकपमा जर्मनी समुह चरणकोे खेलमा सर्बियासँग भने पराजित भएको थियो ।
स्वीडेन पनि आफ्नो रणनितीमा पोख्त छ । इटालीलाई प्लेअफमा पराजित भएको स्वीडेन जुन २३ मा हुने जर्मनी विरुद्धको खेलमा जर्मनलाई चित् पार्न सक्ने क्षमता छ । साथै बुन्डेसलिगाका स्टार इमिल फोर्सबर्गले पनि जर्मनी विरुद्ध यो विश्वकपमा आफुलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
अर्जेन्टीना विरुद्ध नारजेरिया
लियोनल मेसीको बलमा विश्वकप जित्ने दाउमा रहेको अर्जेन्टीनाले नाइजेरियासँग सन् २०१४ मा भोगेका कठिन प्रतिस्पर्धा भुलेको छैन होला । बलियो अफ्रिकी टोली नाइजेरिया ३–२ ले पराजित भएपनि अर्जेन्टीनालाई आच्छु आच्छु पारेको थियो ।
यो विश्वकप अघिको मैत्रीपुर्ण खेलमा पूर्ण क्षमतामा नउत्रेको अर्जेन्टीनालाई नाइजेरियाले ४–२ गोल अन्तरको पराजयको स्वाद चखाएको थियो ।
मेसीलाई गोल गर्न छेक्न सकेको खण्डमा नाइजेरियाले यो विश्वकपमा अर्जेन्टीनालाई हारको स्वाद चखाउन सक्ने क्षमता राख्छ । जुन २६ मा हुने यो खेल ग्रुप चरणको अन्तिम खेल हुने हुनाले यो खेल अझ बढि महत्वपूर्ण हुनेछ । यसले विश्वकपको समिकरण नै बदलिन सक्छ ।
Author HamropipalbotPosted on २५ जेष्ठ २०७५ Categories खेलकुद, फिचर न्युज, विश्वकप २०१८Leaveacomment on यी ५ खेलमा अप्रत्यासित नतिजा आएमा विश्वकप रोमाञ्चक हुनेछ
विश्वकप खेल्न नपाउने देशका स्टार खेलाडी
जब लियोनल मेस्सीको जादु चल्छ, अर्जेन्टिना अघि बढ्छ । अर्जेन्टिना विश्वकपमा छनोट हुनका लागि अन्तिम खेलमा इक्वेडरलाई पराजित गर्नैपर्ने दबाब थियो । यदि बराबरी भएको खण्डमा पनि अर्जेन्टिना २०१८ को विश्वकप बाहिर हुने थियो ।
इक्वेडरलाई ३–१ ले स्तब्ध बनाउँदै अर्जेन्टिनाले नाटकीय तरिकाले विश्वकपमा प्रवेश पायो । यो खेलमा मेस्सीले ह्याट्रिक गोल गरे । अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडीहरूले खेल्ने अवसर पनि पाए । यद्यपी अर्जेन्टिना विश्वकपमा नपुगेको भए ? मेस्सीबिनाको विश्वकप भएको भए ?
तर यो विश्वकपमा यस्ता चर्चित खेलाडीहरूले खेल्न पाएनन् जो सधैँ चर्चामा रहिरहेका हुन्छन् । ४ पटकको विश्वकप विजेता इटाली, विश्वकपमा दमबार प्रदर्शन गर्दै फाइनल र सेमिफाइनलिष्ट नेदरल्याण्ड्स, चिली, वेल्स जस्ता राष्ट्रहरूले विश्वकप गुमाएका छन् भने स्टार खेलाडीहरू विश्वकप टीभीमै हेरेर चिक्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
विश्वकप गुमाउने स्टार खेलाडी
आर्जेन रोबिन (नेदरल्याण्ड्स)
आर्जेन रोबिन त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले नेदरल्याण्ड्सबाट ३ वटा विश्वकप खेले तर, यो पटकको विश्वकपमा भने उनी छैनन् । सन् २००३ देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका रोविनले सन् २००६, २०१० र २०१४ मा आफ्नो राष्ट्र नेदरल्याण्ड्सलाई विश्वकपमा छनोट गराउन सफल भए ।
यही महिनादेखि रसियामा सुरु हुने विश्वकपमा नेदरल्याण्ड्स छैन । यो पटकको विश्वकपमा भने नेदरल्याण्ड्सलाई रोविनले छनोट गराउन असक्षम रहे । विश्वकपको छनोटको समूह ए मा रहेको नेदरल्याण्ड्स स्वीडेनभन्दा पछि पर्दै छनोट हुन असफल भएको थियो । आफ्नै कप्तानीमा नेदरल्याण्ड्सलाई विश्वकपमा छनोट गराउन नसकेका रोविनले त्यसपछि सन्यास लिए । सन् २०१४ को विश्वकपमा रोविनले दमदार प्रदर्शन गरेका थिए । नेदरल्याण्ड्स सेमिफाइनसम्मको यात्रा गर्दा उनले ५ गोल गरेका थिए । पहिलो खेलमा नै स्पेनमाथि ५–१ गोलको जित नेदरल्याण्डले निकाल्दा रोविनले २ गोल गरेका थिए । त्यस्तै, अष्ट्रेलियालाई ३–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा पनि रोविनको गोल समावेश थियो ।
क्वाटरफाइनलमा कोस्टारिकालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–३ ले पराजित गर्दा पनि रोविनले गोल गरेका थिए । त्यस्तै, सेमिफाइनल खेलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा हारेको नेदरल्याण्ड्सका लागि यो खेलमा पनि गोल गरेका थिए । २०१० को विश्वकपको प्रिक्वाटरफाइनलमा स्लोभाकियालाई २–१ गोलले पराजित गर्दा रोविनले खेलको १८औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । यो विश्वकपको सेमिफाइनलमा उरुग्वेलाई ३–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दा रोविनले खेलको ७३ औ मिनेटमा गोल गरेका थिए । तर विश्वकपको उपाधि उचाल्न भने नेदरल्याण्ड्स आभागी बन्यो । यो विश्वकपको उपाधि स्पेनले जितेको थियो । सन् २००६ को विश्वकपमा नेदरल्याण्ड्स अन्तिम १६ बाटै बाहिरिदा रोविनले एक गोल गरेका थिए ।
ग्यारेथ बेल (वेल्स)
ग्यारेथ बेल त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले आफ्नो टिमको पक्षमा नतिजा जुनसुकै बेला पनि पार्न सक्छन् । वेल्सका २८ वर्षीय बेल एक प्रभावशाली खेलाडी हुन् ।
रुसमा हुने विश्वकपका लागि वेल्स छनोट नजिक पुरेर पनि असफल भएको टिम हो । वेल्स विश्वकपमा पुग्न नसकेसँगै स्टार खेलाडी बेलको विश्वकप खेल्ने सपना केवल सपनामै सीमित बनेको थियो । विश्वकप छनोटको अन्तिम ३ खेल भने बेलले खेल्न पाएनन् । मुख्य खेलाडी बेल विनै मैदानमा उत्रिएको वेल्सले विश्वकप छनोटको अन्तिम ३ खेल मध्ये २ खेलमा जित र एक खेलमा पराजित भोगेको थियो । अन्तिम खेलमा रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डसँग १–० गोलले पराजित हुँदै वेल्सले विश्वकप छनोटका लागि प्ले अफ पुग्ने मौका गुमाउदै बाहिरिएको थियो ।
सन् २००६ देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका बेलले वेल्सलाई सन् २०१६ को युरोकपको सेमिफाइनलसम्म पु¥याएका थिए । उनकै उत्कृष्ट प्रदर्शनले वेल्सले ऐतिहासिक सफलता पाएको थियो । केही दिनअघि मात्रै रियल मड्रिडले लिभरपुललाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्दा नायक बनेका थिए, बेल । उनले दुई गोल गरेका थिए । २०१३ देखि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडमा आबद्ध बेल रियलले महत्वपूर्ण उपाधि जित्दा उनको मुख्य भूमिका हुने गरेको छ ।
एलेक्सिस सान्चेज (चिली)
रुस विश्वकपमा छनोट नहुने अभागि टिम मध्ये एक हो, चिली । चिली २०१८ को विश्वकपमा छनोट नभएसँगै फरवार्ड एलेक्सिस सान्चेजको विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै भएको थियो ।
दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, उरुग्वे, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया र पेरु विश्वकपका लागि छनोट हुदा छैटौ स्थानमा रहेको चिलीको भने यात्रा अघि बढेन । यही टिमबा स्टार खेलाडी हुन् सान्चेज । चर्चित खेलाडी सान्चेजले सन् २००६ देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका हुन् । उनले दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न सन् २०१० को विश्वकपमा चिली प्रिक्वाटरफाइनलसम्म पुगेको थियो । अन्तिम १६ मा भएको खेलमा चिली ब्राजिलसँग ३–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो । यसबेला चिलीका फरवार्ड सान्चेजको प्रदर्शन भने राम्रो हुन सकेको थिएन । यो विश्वकपमा सबै खेल खेलेको उनले एक गोल पनि गर्न सकेनन् ।
ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकप २०१४ मा पनि चिलीको लागि फेरी एकपटक बाधक ब्राजिल नै भएको थियो । अन्तिम १६ मा क्वाटरफाइनल प्रवेशको लागि भएको खेलमा पेनाल्टीमा ब्राजिलसँग चिली ३–२ ले पराजित भएको थियो । ब्राजिल विरुद्धको यो खेलमा सान्चेजले खेलको ३२ औं मिनेटमा गोल गर्दै चिलीलाई एक–एक गोलको बराबरीमा पु¥याएका थिए । यो विश्वकपको समूह चरणको खेलमा पनि अष्ट्रेलिया विरुद्ध सान्चेजले गोल गरेका थिए ।
विश्वकप खेल्न नपाएका अन्य खेलाडी
जान ओब्लाक (स्लोभेनिया) एन्टोनियो भ्यालेन्सिया (इक्वेडर), भिर्गील भान डिज्क (नेदरल्याण्ड्स), ग्रे मेडेल (चिली), डेभिड अल्बा (अष्ट्रिया) क्रिस्टियन पुलिसिक (युएसए), नेबी किटा (गिनिया) पिएरे एमरिक औवामेएङ (गाबोन) लगायतका धेरै विश्वचर्चित खेलाडीले यो पटकको विश्वकप गुमाउँदैछन् ।
Author HamropipalbotPosted on २५ जेष्ठ २०७५ June 8, 2018 Categories खेलकुद, मुख्य समाचार, विश्वकप २०१८Leaveacomment on विश्वकप खेल्न नपाउने देशका स्टार खेलाडी
तरुण दल बाँकेको बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द
महिला उद्यमी उपभोक्ता सहकारी संस्था लि. प्रदेश नं. ५ को संयोजकमा सिग्देल
सरकारले काँग्रेसका यूवाहरुलाई खोजिखोजि बिनाकाण फसाउँदै ः महर
यस कारण मेरो उम्मेद्वारीः श्रीकृष्ण थारु
काँग्रेसले नै कोहलपुर वडा नं. ६ मा जित्छ ः नेता भट्टराई